Madaxweyne Farmaajo “Ma jirto Koox gaar ah oo maamulka Dowladda wax ka badali karta “ - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News Madaxweyne Farmaajo “Ma jirto Koox gaar ah oo maamulka Dowladda wax ka...
Madaxweyne Farmaajo “Ma jirto Koox gaar ah oo maamulka Dowladda wax ka badali karta “
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeedinayay furitaanka kal-fadhiga 6aad ee baarlamaanka labada Aqal ayaa ka hadlay Arrimo ay kamid ahaayeen,siyaasada,dhaqaalaha iyo Arrimaha doorashooyinka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in nidaamka Federaalku uu yahay mid ay qaadatay Soomaaliya inta looga qaadayo afti guud, balse ay jiraan Dad u turjuntay si qaldan, wuxuuna ku nuux-nuuxsaday in siyaasadda guud ee Dalka iyo midnimadiisuba ay mas’uuliyad ka saran tahay Dowladda dhexe, koox gaar ahna aysan wax ka beddeli karin.
“Nidaanka Federaalku waa nidaam ay Ummadda Soomaaliyeed u dooratay inuu noqdo hab ku dhisan maamulkooda Dowliga ah, illaa ay Ummadda Soomaaliyeed ayadu go’aansato inay wax ka beddesho nidaamkaasna, ma jirto Dowlad ama koox gaara oo wax ka beddeli karta”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Wuxuu sheegay Madaxweynuhu in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay siyaasad hufan kula dhaqanto Caalamka iyo Waddamada Bariga Afrika oo ay kaalin mug leh kaga jirto, isagoo xusay in aysan ka gor-gortami doonin xaquuqda Soomaaliyeed Bad iyo Berriba.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in ay Dowladdu dejisay qorshe horumarineed, si loo gaaro siyaasad loo dhan yahay, isagoo tilmaamay in ay Diiradda saareen la dagaallanka musuqa, toosinta caddaaladda, habaynta maaliyadda, qaybsiga kheyraadka Dalka iyo hirgelinta nidaamka federaalka.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo qaabilay Nicolás Berlanga
Next articlehaweeney kamid aheyd guddiga Farsamada dhisamaha Galmudug oo is casihay
‘Men don’t trust we’re strong enough’: Somali women push into fish industry
‘Men don’t trust we’re strong enough’: Somali women push into fish...